Chọpụta obodo kachasị mma na ndịda France ịga leta | Bezzia
Obodo ndịda na ndịda France ị ga-agarịrị
Susana Garcia | 02/06/2021 10:00 | si ebi ndụ, njem
La Mpaghara nke ndịda France nwere ike ịnweta site na Spain, ọkachasị ma ọ bụrụ na ibi n’ogbe ahụ dị nso na oke ala. Ọ bụ ya mere ọ ji bụrụ ebe ndị Spain na-eleta bụ ndị na-achọ ịchọta akụkụ France nke ha na-enyochabeghị. Na mpaghara ndịda a, dịka na France niile, enwere ike ịchọta obodo nta nwere ọmarịcha amara nke enwere ike ịga na obere oge.
E wezụga obodo, ileta obere obodo bụ ihe magburu onwe ya, n'ihi na ha nwere mmetụ dị iche, ha dị jụụ ma bụrụkwa omenala. Na ndị bi na ndịda France anyị nwere ike ịhụ otu omenaala ha si dị n'obodo ndị na-enweta mmetụta ha site na Spain dị nso. Anyị ga-ahụ ụfọdụ n'ime ihe ndị kachasị adọrọ mmasị.
1 Carcassonne, ochie citadel
Carcassonne, ochie citadel
Na ebe nke ụlọ nsọ ahụ enweela mmezi nke ndị Rom na narị afọ nke XNUMX, e wuru ebe ewusiri ike mbụ. Trencavels bụ ndị wuru nnukwu ụlọ elu ugbu a, ọ bụ ezie na ewughachi ya n'ọtụtụ oge. Gburugburu narị afọ nke XNUMX owuwu nke akụkụ ala akpọrọ Bastida de San Luis. Nwere ike ịbanye n'ọnụ ụzọ Narbonne, na nso ọdụ ụgbọ ala, iji hụ kilomita nke mgbidi. N'ime e nwere ụlọ elu, ọtụtụ ọnụ ụzọ mbata, Carcassonne Count Castle ma ọ bụ Saint Nazaire Basilica.
Na ngalaba nke Aveyron ị ga-ahụ Najac, n’etiti ugwu nta na-acha akwụkwọ ndụ na mpaghara ugwu. Nke a bụ obodo dị omimi nke nwere ndokwa meandering n'ahịrị na-eduga n'ugwu ahụ, ebe nnukwu ụlọ ahụ dị. Plaça del Barry bụ square ya, ọ na-achọkwa ịga ije naanị n'okporo ámá na-eduga na nnukwu ụlọ. Site na nnukwu ụlọ ahụ, e nwekwara nnukwu echiche panoramic nke mpaghara ahụ.
Belcastel bụ otu n'ime obodo ndị dị na France na-enye anyị ihe anyị na-achọ. O nwere akwa okwute mara mma site na XNUMXth century, ụlọ okwute n'ime gburugburu eke na-enweghị atụ na obi iru ala. O nwekwara ogige nke narị afọ nke XNUMX. Nwere ike ịga otu akụkụ nke nnukwu ụlọ a, ọ bụ ezie na ọ nwere ndị nwe ya. Ihe kachasị mma bụ iji ụkwụ gafere obodo ahụ nwayọ na-achọpụta akụkụ ya. E nwere ọtụtụ ebe nwere teres ga-ezumike n'otu ebe dị ka nke a.
Este obodo dị na Camino de Santiago ọ dịkwa n’etiti mpaghara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ jupụtara, n’ihi ya ọ bụ obodo na-apụ apụ maka ịma mma ya na gburugburu ya. Nwere ike gbagoro n'echiche iji hụ obodo Conques na n'ezie ị ga-agagharị n'okporo ámá ya iji hụ ụkpụrụ ime obodo dị egwu nke obere ụlọ okwute. Nnukwu nnukwu ụlọ ụka Romanesque ya na Portico nke Ikpe Ikpeazụ kwụpụtara.
Nke a bụ otu n'ime ndị ọzọ obodo mara mma na obodo Occitania. Ọ dị na Camino de Santiago Frances, yabụ na ọ bụ ebe ndị mmadụ juru. N'ime obodo anyị nwere ike ịhụ ọmarịcha mbadamba okike n'ụlọ ochie ya. Ọ bụ bastide, obodo gbatịrị site na nnukwu square. Enwere ike ịhụ ya na Plaça des Cornieres, nke n'okporo ụzọ abụọ na-amalite. Nwekwara ike ịhụ ụlọ ụka mara mma nke San Bartolomé nwere ebe ịchụàjà baroque.
Obodo a dị ịtụnanya dị na ngalaba Dordogne, nke dị nso na obodo Sarlat. Ọ dị n’akụkụ osimiri Dordogne na n’elu ọnụ ọnụ ugwu ụfọdụ. Houseslọ ndị ahụ leghaara ugwu ahụ anya n’ụzọ dị ịtụnanya na n'ezie ụzọ kasị mma isi hụ ya bụ site na-ewere a ụgbọ mmiri njem na osimiri. N'ime obodo ị nwekwara ike ịhụ ubi Marqueyssac, ubi ndị mara mma ma debe nke ọma. Dị ka ọ dị n'ọtụtụ obodo nta, nke a nwekwara nnukwu ụlọ, nke Castelnaud la Chapelle
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » si ebi ndụ » Obodo ndịda na ndịda France ị ga-agarịrị